LA LIGA: Kooxda Barcelona oo barbaro la soo gashay Real Betis oo ay booqatay… + SAWIRRO – Gool FM
LA LIGA: Kooxda Barcelona oo barbaro la soo gashay Real Betis oo ay booqatay… + SAWIRRO
Haaruun January 29, 2017
(Seville) 29 Jan 2017 – Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa barbaro 1-1 la soo gashay naadiga Real Betis oo ay booqatay kulan ka tirsan horyaalka La Ligaha Spain.
Markii dib la isugu soo laabtay qeybto labaad ee ciyaarta kooxda Barcelona ayaa gool looga naxsaday waxaana goolka hore ee ciyaarta u dhaliyey Real Betis 75’daqiiqo Alexander Alegria, kaddib caawin uu ka helay Ryan Donk, kooxda Barca ayaana lagu hoggaamiyey 1-0.
Dhammaadkii ciyaarta waxaa Barcelona guuldarro ka badbaadiyey Luis Suarez, kaddib markii uu goolka barbaraha u dhaliyey markii uu caawin ka helay Lionel Messi, kulanka ayaana ugu dambayn ku soo dhammaaday gar isku mid ah 1-1.
Barcelona oo haddii ay badin lahayd si KMG ah u qaban lahayd hoggaanka horyaalka La Ligaha Spain ayaa ku jirta kaalinta labaad haatan iyadoo leh 42-dhibcood.
GOOGOOSKA: Sampdoria vs AS Roma 3-2 (Roma oo lagu rukhuusay kulan rigoore laga diidey)
GOOGOOSKA: Sassuolo vs Juventus 0-2